Iwe zvakajeka haugone kufara ne Windows 10 PC iyo inopa isina kusimba odhiyo, saka ngatikubatsirei kunze.
Kugadzirisa izvi, iwe unogona kuedza iyo Boom 3D inowedzera sauti kana kushandisa yakakurumbira VLC Media Player.
Dzidza mamwe matipi ekuwedzera iwo vhoriyamu inzwi kubva kwedu Chikamu cheDambudziko Dambudziko.
Nhau dzinonzwika dzinogona kukanganisa ruzivo rwako rwese. Gara kure navo kure neane manomano achangobva kuwanikwa mune izvi Tech Tutorials Hub.
Maraputopu haawanzo kuuya neyekunze masipika, ayo anotadzisa iwo avo ekuwedzera vhoriyamu zvishoma. Nekudaro, iwe haufanire kuwedzera mutauri nyowani kuti uwedzere palaptop odhiyo inopfuura 100%.
Windows yatove nechunhu mashoma iwe aunogona kusarudza kukwidza malaptop kana odhiyo yedesktop zvishoma zvishoma pane yakasarudzika yepamusoro.
Kunyangwe zvimwe, kune zvakare akawanda chechitatu-bato zvirongwa izvo zvinogona kuwedzera vhoriyamu kusvika kusvika ku500%.
Ndingaite sei kuti ndiwedzere Laptop vhidhi kupfuura yepamusoro?
1. Wedzera Boom 3D mutsindo enhancer ku Windows
Ichi chishandiso chinoshamisa odhiyo inosimudzira iyo inokutendera iwe kuyedza nezwi pane yako Windows Laptop kana PC zvakadaro zvaunoda.
Boom 3D ine inoshamisa saizi ine huwandu hwakavakirwa-zvakanaka akagadzirirwa iwe aunogona kushandisa, kana iwe unogona kugadzira yako yekutanga kubva kutanga.
Kugadzira yako preset inogona kukwidziridza Laptop yako vhoriyamu pamusoro pekutanga kwayo 100%.
Nepo vatambi vazhinji kana mapurogiramu achingokwiridzira kuwanda kwese, Boom 3D inokuita kuti uwedzere kuwedzera huwandu pasina kukuvadza vatauri kana mahedhifoni.
Ruzha ruve rwakachena uye mafambiro haapindire. Uyezve, iwe unogona kuwedzera akawanda manzwi ekukubatsira iwe kusimudza kukwikwidza yako palaptop vhoriyamu pamusoro pe100% pasina kuva nehasha.
Yakanakisisa yemahara enhancer Boom 3d
Windows 10 enderana
Kwidziridza odhiyo ine simba yakaenzana
General vhoriyamu Boost
Kubatsira kukuru kwevatengi
Download ikozvino Tenga izvezvi
2. Sarudza iyo Loudness Equalizer sarudzo mu Windows
Dhinda bhatani rebhatani raCortana, uye nyora kiyi kiyi Audio mubhokisi rekutsvaga reapp.
sarudza Chengetedza odhiyo kuvhura hwindo zvakananga pazasi.
sarudza Vatauri uye chengetedza Properties bhatani rekuvhura iyo General tab inoratidzwa mune yepazasi pazasi.
Sarudza iyo Enhancement tabu pane Vanotaura Zvivakwa hwindo.
Sarudza iyo Rudado Equalizer cheki cheki Enhancement Tab.
Chindai Shandisa > OK mabhatani kuvhara hwindo.
Kutanga, tarisa Rudado Equalizer sarudzo in Windows. Kusarudza iyo seti kunokwidza vhoriyamu zvishoma pamusoro payo default default maPC neRealtek odhiraivha odhiraivha
kana Windows 10 vhoriyamu yakanyanya kuderera, iwe unogona chengetedza mutungamiri uyu kuti uwane maitiro ekugadzirisa dambudziko.
Update: Zvinoita sekunge Microsoft yabvisa Loudness Equalizer kubva kumadziro edhiyo. Kuti uwane rumwe ruzivo pamusoro penyaya yacho, nyatsoongorora nyaya ino.
Kana iwe uri pane yazvino vhezheni ye Windows 10 uye haugone kuwana Loudness Equalizer, enda kumhinduro dzinotevera.
Yako vhoriyamu icon iri kushayikwa pa Windows 10? Idzorere neiyi nhanho-nhanho gwara.
3. Gadzirisa mabhaidhi vhoriyamu pamapeji evhidhiyo
Mapeji evhidhiyo pane YouTube uye saiti dzakafanana dzinowanzo sanganisira vhoriyamu bar. Iwe unogona kuwana ruzha rwevhidhiyo yeYouTube harufanire kusvika padanho rakasarudzika redhiyo mu Windows kana iyo inotsvedza ichienderera kuruboshwe kurudzi rwayo vhoriyamu.
Iwe unokwanisa kugadzirisa iro rekuteerera revhidhiyo yeYouTube nekusimudza kasaidhi pane icon yemutauri inoratidzwa mune ino snapshot yakananga pasi apa.
4. Wedzera VLC Media Player ku Windows
Chindai Dhawunirodha VLC bhatani pane VLC rembapeji kuchengetedza media player's setup wizard ku Windows.
Vhura iyo VLC yekuseta wizard yekuisa software.
Wobva wavhura iyo VLC hwindo.
sarudza Zvaunogona Kuchinja pane Zvishandiso menyu. Neimwe nzira, tinya Ctrl + P hotkey kuvhura VLC's Zvaunoda hwindo.
Sarudza iyo zvose redhiyo bhatani pazasi kuruboshwe kwe Zvipinganidzo Zvirimo Tab.
Isa iro rinokosha yakakwira vhoriyamu mubhokisi rokutsvaga.
Click Qt kuvhura zvakare Qt interface masisitimu.
Inzwa '300' mu Upamhi hwevheti hwakaratidzwa chinyorwa bhokisi.
Chindai Save bhatani rekushandisa iyo itsva mamiriro.
Vhara uye vhura iyo VLC media player kutangazve software.
Ikozvino vhoriyamu yeVLC ichave yakakwira pa300% pachinzvimbo che125%.
Iyo freeware VLC media player ine default vhoriyamu nhanho ye125% yevhidhiyo nemumhanzi. Nekudaro, vhidhiyo uye mimhanzi kutamba muVLC iri 25% yakakwira kupfuura yakanyanya vhoriyamu mu Windows.
Iwe unogona zvakare kusimudza VLC vhoriyamu kuenda ku300% nekugadzirisa imwe yeesoftware magadzirirwo sezvatsanangurwa pamusoro.
VLC iri kubhadhara Windows 10? Iwane iyo kuti imhanye zvakanaka nekutevera matanho kubva kuchinyorwa ichi.
5. Wedzera Sound Booster ku Windows
Iko 300% yekuwedzera vhoriyamu haina kukwana? Saka zvakadii nezve 500% kuwedzera panzvimbo? Letasoft inozvirumbidza kuti yayo Sound Booster software inomuka Windows'odhiyo nhanho inosvika kusvika 500%.
Izvo zvinogona kunge zviri kushambadzira hype, asi chirongwa zvirokwazvo chinoita mutsauko mukuru. Iyo software inosimudza ruzha nema APO maitiro uye kodhi jekiseni.
Rwiyo Booster harisi freeware, asi iwe unogona kuedza imwe shanduro yemuyedzo yechirongwa kwemavhiki mashoma nekumanikidza Download Now bhatani pane izvi peji rewebhu.
Iyo yekuyedza vhezheni haina kukwidziridza ruzha rwemasekondi mashoma maminetsi mashanu. Iyo Basic Sound Booster vhezheni iri kutengesa zvakare pa $ 19.95.
Paunenge uine software inoshanda, tinya system yayo tray icon. Ipapo unogona kusarudza a Bvumira sarudzo pane yayo bhaidhi bar.
Unogonawo kusarudza Kupindira uye APO mhedzisiro Boost Mode marongero kubva kune Inzwi Booster menyu. Uye zvakare, Inzwi Booster inogonesa vashandisi kumisikidza hotkeys kuti vagadzirise odhiyo ne.
6. Wedzera iyo Bhuku Boost Kuwedzeredzwa ku Chrome
Open peji rewebhu uye dzvanya bhatani rakasvibira ipapo kuti uwedzere kuwedzerwa kuCh Chrome, uye tanga zvakare browser.
Ipapo iwe unogona kumanikidza Bhuku rekusimbisa bhatani pane chishandiso cheChannel chekusimudzira ruzha.
Chindai Dzima bhatani rekudzosera bhurawuza kubva kune yekutanga vheji.
Munguva pfupi iwe uchakwanisa kuisa Chrome yekuwedzera paEdge, futi. Kana iwe uchida kuziva kuti riini uye sei richashanda, tsvaga ne kuverenga chinyorwa ichi.
Vashandisi veGoogle Chrome vanogona kuwedzera odhiyo neiyi Vhoriyamu Booster kuwedzera. Mushambadzi wekuwedzera anoti Vhoriyamu Booster inokwidza vhoriyamu nekana kana padanho rekutanga.
Saka iwe unogona kukwidza vhoriyamu mu Windows zvimwe zvinopfuura zana muzana neiyo Ruzha Equalizer sarudzo, VLC media player, Vhoriyamu Booster, uye Inzwi Booster.
Iwe unogonazve kumutsiridza iro vhoriyamu nekuisa wechitatu-bato dzakaenzana dzakadai Chiyero APO. Izvi Bluetooth speakers inogona zvakare kuwedzera odhiyo mu Windows.
Imwe nyaya kana imwe, ziva kuti mhinduro dzakambotaurwa dzinofukidza zvese izvi zvinyorwa zvaunogona kufarira:
Bhuku rekusimbisa re Windows 10 - Zviri nyore kuwedzera vhoriyamu pane yako Windows 10 haichisiri chiroto. Iwe unogona nyore kuwana izvo kana uchinakidzwa neBoom 3D ruzha inowedzera.
Nzira yekuwedzera sei ruzha pane laptop? - Kuti uwedzere ruzha rweLaptop kune ese mafirimu uye audiobooks, ingoshandisa iwo matipi akatsanangurwa pamusoro.
Wedzera vhoriyamu mukati Windows 10 - Kana iwe uchida kukwidza vhoriyamu mukati Windows 10, usatya kugadzirisa vhoriyamu mabhawa kana kuwedzera iyo VLC Media Player.
Ruzha Boost ye laptop - Kuti uwedzere yako yepamusoro laptop vhoriyamu, yepamusoro tora inogara iri iyo Letasoft Sound Booster software.
FAQ: Dzidza zvakawanda nezvekuwedzera Laptop vhoriyamu
Inonzwika Boost inoshanda here?
Hongu, chirongwa ichi zvirokwazvo chicha simudza vhoriyamu kupfuura 100%. pano iwe unowana mamwe matipi ekuwedzera laptop vhoriyamu.
Pane chirongwa chekusimudzira chechinyorwa chandinga dhawunirodha laptop yangu?
Ehe zviripo. Boom 3d iri yakasimbiswa audio yekuvandudza software mhinduro iwe yaunogona kuisa pane yako laput.
Ndingaite sei kuti ndiwedzere kunaka kwekunzwika komputa yangu?
kushandisa yakanakisa audio equator software inokurudzirwa inoshamisa bass inowedzera uye chaiyo yakagadziriswa toni. Iwe unofanirwawo kushanyira izvi nerupo runyorwa rwevadudziri vanowedzera.
I5 Zvinhu Zvakanyanya Kupfuura NezveVLC 3.0
Sei Kurekodha Windows 10 Screen Uchishandisa VLC Media Player
Vakanakisa makutauri eBluetooth efoni yako (2017)